विस्तारवादको प्वाल टाल्ने एकताको वाल लगाउन रकम घोषणा ! « Gajureal
विस्तारवादको प्वाल टाल्ने एकताको वाल लगाउन रकम घोषणा !
शेखर काका राजनिती गर्नु हुन्न तर राजनीति जान्नु हुन्छ । वहाँले आफ्नो जिवन कालमा भएका सबै राजनीतिक आन्दोलनलाई नजिकबाट हेर्नु भएको छ । तन, मनले समर्थन गर्नु भएको छ ।
२००७ साल, २०१५, २०३६, २०४६, २०६३ हुँदै २०७७ सालसम्म आइपुग्दा यसबीचमा उठेका अधिकांस राजनीतिक मुद्दाहरु टुङ्गीएका छन् । तर, ब्यबहारमा जनताले परिवर्तनको अनुभुती गर्ने वातावरण बन्न नसकेको देखेर होला- काकाले आज मनको कुरा यसरी बताउनु भयो…
‘खै, मैले नबुझ्या हो कि नेताहरुले नसुन्या हुन्, थाहा छैन । रोग टाउकोमा लागेको छ, ओखती नाइटोमा दलेर हुन्छ ? देशले भोगेका धेरैभन्दा धेरै समस्याको जराे सिमा वारी होइन, सिमा पारी छ ।
किलो पनि उसैले गाड्छ, पिल्लर पनि उसैले सार्छ । गोली पनि उसैलै हान्छ, छोरी पनि उसैले तान्छ । राम्रा राम्रा उतै कटाउछ, कुहिया सड्या यता पठाउँछ । ‘हामी ओखती सम्झेर खान्छौं, त्यो बिष भई सकेको हुन्छ । मिति छउन्जेल पो औषधी, मिति गुज्रिएपछी बिष हो ! जानीजानी डेट एक्सपायर औषधी हामीलाई नै पठाउँछ ।
त्यतिमात्र हैन, हाम्रो देश मान्द्रो फिंजाए झै मेचीकाली लमतन्न सुतेको छ । मान्द्रोको लम्बाई तिरको बीट अलि अलि, अलि अलि गर्दै धमिरा र माउले खाएझैं कुटुकुटु चपाई रहेको छ । हुँदाहुँदा ऐले सुन्दैछौँ, हाम्रा गोडामाथिबाटै गाडी गुडाएर पल्लो गाउँ पो पुर्याउँछ रे !
त्यतिमात्र कहाँ होर, हाम्रो देशभित्र हुने हतियारबन्द आतंकबादी गतिबिधिको श्रोत समेत उतै हो ! एउटा द्वन्द टुङ्ग्यायो, अर्को प्रवर्धन गरिहाल्छ ! द्वन्द्वको व्यापार न हो । आश्रय उसैले दिन्छ । बेरोजगारलाई दाम दिन्छ, माम पनि दिन्छ । ‘खाई लाई टुपी हल्लाई’को काम पाएपछि कस्ले छोड्छ !
समस्या त हो, अव के गर्ने, गर्ने के त ?
आफ्नो बारीमा अर्काको गाई पस्छ, बालीनाली दाँई गर्छ भने बलियो बार बार्नु पर्छ । भाई नै पसेर फोर्छ, चोर्छ र सोहोर्छ भने के गर्ने थाहा छ ?, ‘ग्रेटवाल’ वाह ! सुन्दै गौरव लाग्छ । ‘गुर्खाज’ वालका नामले चर्चित बनाउँदै वारपार पर्खाल हाल्नुपर्छ ।
तर यो, भन्न सजिलो गर्न गाह्रो छ ! चार आना जग्गा किनेर सिमाना छुट्याउन एक फिटको गारो लगाउँ भन्दा त सधै सँगै बस्नु पर्ने सुख: दु:खको साथी छिमेकीले समेत अण्ट सण्ट गरेर बबण्डर मच्चाउछ । झन् भारतले आफ्नो आवश्यकता अनुसार पस्न, बस्न, र डस्न पाउने, लडाकु बोलाउने र सडाउ पठाउने, इमान्दार पाले र कुहिया फलफूल र तरकारीवाले साट्ने स्वर्णिम अवसर गुमाउला र ? यसको उत्तरचाहीँ खोज्नु पर्छ । किनकी स्याललाई पैंचो दिएको कुखुरो फिर्ता गर्न गार्हो छ ।
अब आँट गर्नुपर्छ । पानीमरुवा पाराले दु:ख पायौं साराले ! ऐले जो जहाँ छन् रहिरहन्छन् । पारी गोर्खा पल्टन बनुन् वा वारी बिजिनेस पैसा गनुन् । पारी असल पाले बनुन् वा वारी गोलभेडा आलु भनुन्, तर आएँ भनेर आउन, गएँ भनेर जाउँन ।पस्दा बिल्ली त्यसपछि सिल्ली नबनुन् । कार्ड सिस्टम, भिषा सिस्टम मात्र गरौं । कानुनी प्रकृयामा बाँधिए पछि देख्दा गोल्भेडा बेच्ने तर लाखाैं रेमिटान्स लानेले नेपाललाई ट्याक्स बुझाउछन् नि ।
तर, पर्खाल लगाउने यत्रो पैसो चाहीँ कहाँबाट निकाल्ने ?
भनिन्छ नि, जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय ! सरकारल इमान्दार भएर एउटा कोष खडा गरोस्, म कम्तीमा ५० हजार योगदान गर्छु । हरेक नेपालीले आफ्नो क्षमता अनुसार पैसा बर्साउने छन् । अभियानको नारा ‘मेची- काली लम्बेतान, गोर्खा पर्खाल हाम्रो सान, मात्रीभुमी सम्झेर गरौं सबैले योगदान‘ हुनुपर्दछ ! पर्खालको उद्घाटन पछि पासपोर्ट बोकेर जब नेपाल-भारत आवागमन हुन्छ – यति गरेपछी दुवै देशलाई फाइदा हुन्छ । कि कसो ?
‘कुलमान बिरोधी’का काईते तर्क, अँध्यारो त उज्यालोले हटाएको हो !
-सरोज घिमिरे, गौरादह-८, झापा जबदेखि देशमा कुलमान उदाए तबदेखि जनताले ठुलो दु:ख पाए । हो
‘कोरोना भाइ’लाई ‘घिमिरे दाई’को धम्कीपत्र !
झापा जिल्ला जुरोपानीको सरोज घिमिरेले कोरोना भाइरसलाई हदैसम्मको धम्की दिएका छन् । बिश्वलाई लक डाउनमा
खुकुलो लक डाउनमा कडा कडा लक अप !
-केशवराज गजुरेल कोरोनाले देशैभरी जालो बुन्दैछ, घरघरमै पुग्नेगरी बाटो खन्दैछ !
यस्तो दुष्ट छोरो कसैको नहोस् !
-धिरेन्द्रराज गजुरेल जन्माइ छोरो जगयो हँसाई पकाइ माड मुखमा चटाई । पिलाइ दूध
नेकपा दोहोरी : विश्वासमा श्वासप्रश्वासको समस्या
पेट्रोलको भाउसँगै पेटको घाउपनि बढ्न थाल्यो, अब के गर्ने !
परराष्ट्र मन्त्रीको हात समाउँदै राजनाथ सिँहले साेेचे- ‘देखेँ, ज्वरो उतरा…
कलेजका ठुल्ठुला चौर : चर्ने कि पढ्ने !
‘ईलाका मेरा धमाका तेरा, जहाँ केरा त्यहाँ डेरा ?’ HowGuZee…